Shira barattoota irratti yaadamee fi Ergaa Ariifachiisaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsShira barattoota irratti yaadamee fi Ergaa Ariifachiisaa
Shira barattoota irratti yaadamee fi Ergaa Ariifachiisaa
PPn galmee kaadhimamtootaa Oromiyaa keessaa akkuma dhabdeen galmeen filattootaa Oromiyaa keessaas ni dhiba jettee hedduu sodaattee jirti. Kanaaf,barattootni mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi Yuunivarsiitii dirqamaan kaardii akka fudhatan karoora baasuun hojiitti seenanii jiru. Barattootni kaardii filannoo hin qabne barnoota barachuu hin danda’an jechuun karoora baasanii hojiitti galaniiru. Kanaaf, barattootni Oromiyaa keessaa sagalee mormii bakka jirtu hundatti akka dhageessistuu fi gamtaadhaan fashaleessitu, lammiileen Oromiyaa hundis kaardii filannoo fudhachuu lagachuudhaan PP ammas akka qaanessitu waamicha goona.
Globan Economic Forum har’a gabaasaa qabatee baheen “kana beektuu?” nuun jedheera. Baajatni RIB kan bara 2021 qarshii biliyoona 23.67 kan ture,hanga ammaa qofaa qarshii biliyoona 741.96 baasee jira jedhe. Kisaaraa namaan immoo miseensota RIB keessaa harki 57.15 kaan ajjeefame, kaan madaa’e,gariin baqatee hojii dhiise jechuun saaxile.
Lammiileen Oromiyaa akkuma eegalaetti Mootummaa Cehumsa Biyyoolessaa Oromiyaa hundeeffachuu malee Filannoof of qopheessuu hin qabu.
#MCBO Bitootessa 27/2021
Akkuma ABOn baatii Fulbaanaa waamicha Mootummaa Cehumsa Biyyoolessa Oromiyaa hundeessuun nagaa fi tasgabbiin kan bu’u malee filmaata murni afaan qawween biyya bulchuun akka nageenyi hin jiraanne jedhee labse Ummatni Oromoo fi lammiileen Oromiyaas hubattanii caasaa murna ppn amma afaan qawween aangoo of irraan qaba jedhee lammiilee nagaa ajjeesaa fi hidhaa jiru diiguu fi dadhabsiisaa akkuma jirtan ammas jabeessitanii akka xumura murna abbaa Irree sirna moofaa deebisuuf carraaqutti qabsoon akka goolabdan waamicha goona.
Lammiileen Oromiyaa kaardii Filannoo osoo hin taane caasaa maqaa mootummaan hojiirra jiru diiguu fi dadhabsiisuun MCBO kan lammiileen Oromiyaa keessatti of ilaalanii fi keessatti qooda isaanii bahatan hundeeffachuutti akkuma eegaltan ammas jabeessitanii akka itti fuftan jenna.
Murna pp kan afaan qawween biyya bulchuuf carraaqu boolla gadi fagoo kan keessaa bahuu hin dandeenye qotachaa akka jiru Addunyaan yeroo argitee balaaleffachaa jirtutti lammiileen Oromiyaas caasaa murna afaan qawween biyya goolaa jiru diiguun kan mataa isaa kan ummataan filamee ummata bakka bu’u ijaarrachuutu filannoo keenya jechuu qaba. Kaardii Filannoon osoo hin taane nagaa fi tasgabbiin mootummaa ummataa ummataan ijaarrachuutiin dhufa.
lammiileen Oromiyaa filannoof osoo hin taane oromiyaa keessatti MCBO hundeeffachuuf dirqama of irraa bahatanii hojjechuu qabu.
Kaardiin Filannoof fudhannu hin jiraatu hanga ABO fi KFOn Filannoo keessa hin jirre kaardiin nuyi qabachuu ykn fudhachuuf qabnu kaardii MCBO ijaarrachuuti.
Mormiin Kaabinoota gidduutti dhalateera.
Kaabineen Mootummaa Naannoo Oromiyaa walgahii ariifachiisaa irratti argama. Walgahiin kun dhimma filannoo fi nageenya Oromiyaa irratti fuulleffate. Oromiyaa bakka hedduutti Oromoon garbummaa jalaa bahee of bulchuu eegaluu,Caasaan PP diigamuu amananii jiran. Dhimma filannoo irratti “filannoon hirmaachisaadha.” Kan jedhame soba tahuu keessoo isaaniitii falmiin ka’ee jira. Wal mormii guddaatu gidduu isaaniitti amma gaggeeffamaa jira. Hidhamaan siyaasaa kumaatamni jira kanneen jedhanii ejjennoo qabatanii fi Shimallis Abdiisaa,Cundhuurri immoo hidhamaan siyaasaa hin jiru jedhee mormiin isa mudateera. Gabaasaa guutuu qabannee deebina.
Of eegannoo Wallaggaa Bahaaf
Humni Addaa Amaaraa kaleessa naannoo Beenishaangul Gumuz,Matakkal keessatti manneen qotee bulaa gubaa turanii fi ajjeesaa turan gara Wallaggaa Bahaattin qajeelanii jiru. Aanotni daangaa irraa hundi of eeggannoo keessan cimsaa
Jirra ammallee cimne dhaabbanne:- ASEGID ABEBENE